BWUnion – Burmese Women's Union
August 10, 2021 in Photos /by BWUnion
July 10, 2021 in Photos /by BWUnion
Moneywa women protest
ဖိနှိပ်ထားသော်လည်း မာန်မချသည့် အာဂအမျိုးသမီးများ (ဧပြီ-ဇွန် ၂၀၂၁)
June 14, 2021 in News Briefing /by BWUnion
၃ လအတွင်း အမျိုးသမီးများ၏အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းသုံးသပ်ချက်
မန္တလေး ညမထွက်ရအမိန့်- ကျည်တစ်တောင့်တည်းနဲ့ နှစ်ယောက်ထိမှန်ခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
May 22, 2021 in News /by BWUnion
“အမှောင်ထဲကနေ သေနတ်နဲ့ နှစ်ချက်ပစ်လိုက်တယ်။ ပစ်ပြီးမှ ရပ်ဆိုပြီး အော်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျည်ထိသွားမှန်းလည်း အဲဒီတုန်းက မသိလိုက်ဘူး။” ဧပြီလ အစောပိုင်းက မန္တလေး မနော်ဟရီ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဇနီးသည် အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း သေနတ်ကျည်ထိမှန်ခဲ့တဲ့ ကိုဘိုဘိုက အဲဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်ပြောင်း ပြောပြနေတာပါ။ အဲဒီတုန်းက မန္တလေးမြို့မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄၊ ည ၈ နာရီနောက်ပိုင်း အပြင် မထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ထားတာကြောင့် ည ၇ နာရီခွဲလောက်မှာ အိမ်ကို တက်သုတ်ရိုက် ပြန်လာခဲ့ပေမယ့် “ကင်းပုန်း” လို့ အများစု ခေါ်ကြတဲ့ လျှို့ဝှက်ချထားတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ ကိုဘိုဘိုတို့ ဇနီးမောင်နှံ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါ။ မနော်ဟရီ ၅၆ လမ်းနဲ့ […]
May 14, 2021 in News Briefing /by BWUnion
မေလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ သတင်းအနှစ်ချုပ်
၁ လအတွင်း အမျိုးသမီးများ သတင်းအနှစ်ချုပ်
Women’s League of Burma (WLB) calls on international support for the immediate release of Women’s Human Rights Defender Thin Thin Aung
April 9, 2021 in Statement /by BWUnion
April 7, 2021 in Women's Movement /by BWUnion
The Women’s League of Burma (WLB) is an umbrella organisation comprising 12 women’s organisations of diff erent ethnic backgrounds from Burma. WLB was founded on 9th December, 1999. Its mission is to work for women’s empowerment and advancement of the status of women, and to work for the increased participation of women in all spheres of society in the democracy […]
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသူများအတွက် ကာကွယ်ရန် အထောက်အကူပြုသည့်အချက်များ
April 7, 2021 in Gender Based Violence /by BWUnion
Archives Select Month November 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 August 2019 December 2018 November 2018 November 2017 November 2016 July 2016 June 2016 April 2016 October 2015 August 2015 November 2014 September 2014 January 2014 June 2013 January 2013 November 2012 March 2012 February 2012 December 2011 August 2011 March 2011 January 2011 May 2010 March 2010 January 2009 August 2007 March 2007 May 2005 September 2004 August 2003 March 2002 March 2000 March 1999
Gender Movie (1)
News Briefing (9)